Jery taratra… herinandro: vita fifidianana… mila milamina | NewsMada
Jery taratra… herinandro: vita fifidianana… mila milamina
Nilamina tamin’ny ankapobeny ny fizotran’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana mpanolotsain’ny Tanàna, araka ny tatitry ny eo anivon’ny Ceni. Na izany aza, maro ireo tsy fahatomombanana tetsy sy teroa tamin’izany.
Anisan’izany, ohatra, ny fifamadihan’ny biletà tokana tamina kaominina roa mifanila. Teo koa ny fisian’ny kandidà ben’ny Tanàna tsy tao anatin’ny biletà tokana. Noho izany, voatery nanonta biletà vaovao ny Tranopirintim-pirenena.
Saika mbola tsy mahafa-bela hatrany ny fitarainan’ny mpifidy manana kara-pifidianana, nefa tsy ao anatin’ny lisi-pifidianana ny anarany. Lazain’ny Ceni fa mety niova ny birao fandatsaham-bato misy ny mpifidy ny amin’izany.
Nisy koa ny tao anatin’ny lisi-pifidianana ny anarany, saingy tsy nahazo kara-pifidianana. Voalaza fa nahazo nandatsa-bato ihany ny mpifidy toy izany, rehefa nitondra kara-panondro, na karatra fahazoana mamily fiara, na pasipaoro.
Samy nilaza ny maha zava-dehibe ny fifidianana kaominaly ireo filohan’andrimpanjakana. Izay no miantoka ny fampandrosoana eny ifotony. Teo koa ny fanentanan’izy ireo ny olom-pirenena hanefa ny adidiny amin’ny fandatsaham-bato.
Na izany aza, hatramin’ny fotoana farany: amin’ny ankapobeny, saika eo amin’ny 20% ka hatramin’ny 30 % eo avokoa ny taham-pandraisana anjaran’ny mpifidy tamin’iny fifidianana kaominaly iny manerana an’i Madagasikara.
Amin’ny 16 desambra farafahelany no hamoahan’ny Ceni ny voka-pifidianana vonjimaika. Amin’ny 14 janoary 2020 no hanambaran’ny fitsarana misahana ny ady atao amin’ny fanjakana isam-paritany ny voka-pifidianana ofisialy.
Nanamafy ny Ceni fa izy ihany no manana fahefana hamoaka ny voka-pifidianana vonjimaika. Hisy ny famoahany ny fironan’ny voka-pifidianana isaky ny kaominina, ka tokony hiandry amim-pitoniana izany ny rehetra.
Eo izany izao ny rehetra vita fifidianana… mila milamina.